အဂတိမှုနဲ့ ထောင်နှစ်သုံးဆယ်ကျတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း
အဂတိမှုနဲ့ ထောင်နှစ်သုံးဆယ်ကျတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်...
22 พ.ค. 2563 - 17:00 น.
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ကို အဂတိလိုက်စားမှုလေးမှုနဲ့ စုစုပေါင်း ထောင်နှစ်သုံးဆယ် ကျခံစေဖို့ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်က မေ ၂၂ ရက်မှာ အမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်လဲ့လဲ့မော်ကို တရားစွဲခဲ့တဲ့ အမှုလေးမှုမှာ တစ်မှုစီကို ထောင်ဆယ်နှစ်စီချခဲ့တာဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းထောင်နှစ်လေးဆယ်ဖြစ်ပေမယ့် GGS ကုမဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်မှုမှာတော့ ပြစ်ဒဏ်ကို တစ်ပေါင်းတည်းကျခံဖို့ အမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ထောင်စုစုပေါင်း နှစ်သုံးဆယ် ကျခံရမှာဖြစ်ပြီး အမှုရင်ဆိုင်နေစဉ် ချုပ်ရက်တစ်နှစ်ကျော်ကို ထုတ်နုတ်ခံစားခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီအမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ သူပိုင် သရက်ချောင်းက နေအိမ်ကိုလည်း ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ အန်အယ်လ်ဒီအစိုးရလက်ထက် အဂတိမှုနဲ့ထောင်ချခံရတဲ့အစိုးရအရာရှိတွေထဲ အဆင့်အမြင့်ဆုံး ရာထူးရှိသူ အရေးယူခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်လဲ့လဲ့မော် ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုတွေက ဘာတွေလဲ
ပထမတစ်မှုကတော့ ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ဟာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့မညီဘဲ ငွေကျပ် နှစ်ဘီလျံနီးပါးကို လမ်းဦးစီးဌာနက ထုတ်ယူခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို အခွင့်အရေးပေးခဲ့တဲ့အတွက် ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ဟာ သူ့ခင်ပွန်းနာမည်နဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ ထားဝယ်က အိမ်ကို လမ်းဦးစီးဌာနကို ခြံစည်းရိုးခတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ဒေါ်လဲ့လဲ့မော်က ပြင်ပ က အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ တရားရုံးမှာ ခုခံထွက်ဆိုခဲ့ပေမယ့် အဂတိကော်မရှင်က တရားစွဲဆိုတော့မှာသာ ခြံစည်းရိုးခတ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကို ပေးချေခဲ့တာလို့ စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယတစ်မှုကတော့ လူထုကြား အင်မတန် နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ကျပ်သိန်းလေးထောင်ကျော် ကုန်ခဲ့တဲ့ ထားဝယ်လေယာဉ်ကွင်းခြုံရှင်းခဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ထားဝယ်လေယာဉ်ကွင်းမှာ ခြုံရှင်းတာ၊ လေဆိပ်အဆောက်အဦဟောင်းကို ပြင်ဆင်ဖို့နဲ့ ခြံစည်းရိုးခတ်ဖို့ လုပ်ငန်းသုံးရပ်အတွက် တိုင်းအစိုးရ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ဆောင်ရွက်စေခဲ့ပေမယ့် မြေပြင်မှာတော့ ခြုံရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲ ပြီးစီးခဲ့တယ်လို့ တရားခွင်မှာ စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်အမှုနှစ်ခုကတော့ ထားဝယ်မှာ လျှပ်စစ်မီးဖြန့်ဖြူးတဲ့ GGS ကုမ္ပဏီနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အမှုနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထားဝယ်ကို လျှပ်စစ်မီး ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ အဲဒီ GGS ကုမ္ပဏီက ပေးရမယ့်ဓာတ်ငွေ့ဖိုး ကြွေးကျန်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ထားဝယ်မှာ လျှပ်စစ်မီးဖြန့်ဖို့ တိုင်းအစိုးရနဲ့ ဒီကုမ္ပဏီတို့ ၂၀၁၆ မှာ စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး အဲဒီစာချုပ်မှာ ကွက်လပ်ဖြစ်နေတဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်ထားပါတယ်။ ထားဝယ်ကို ဒီကုမ္ပဏီက လျှပ်စစ်မီးပေးဖို့ ခွင့်ပြုချက်ဟာ တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အစည်းအဝေးမှာ ဆုံးဖြတ်ထားတာမရှိဘဲ စာချုပ်အရင်ကြိုချုပ်ထားတာတွေကို တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိထားပါတယ်။
နောက်တစ်မှုကတော့ သိန်းသုံးရာကျော်တန်တဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရဲ့ နေအိမ်ကို GGS ကုမ္ပဏီကို ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ကျော်ပေး၊ ဝယ်စေခဲ့ပြီး အဲဒီ ကုမ္ပဏီကို ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ချပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
GGS ကုမဏီဟာ ဒေါ်လဲ့လဲ့မော်ကို လာဘ်ပေးပြီး တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်အခွင့်အရေး အမျိုးမျိုး ရယူခဲ့တယ်လို့ အဂတိတိုက်ဖျက် ရေးကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒေါ်လဲ့လဲ့မော်နဲ့အတူ Global Grand Services(GGS) ကုမဏီမန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဦးသိန်းထွေး၊ ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မြတ်နဲ့ ဦးသူရအုံ တို့ကို အဂတိလိုက်စားဖြစ်အောင် အားပေးအားမြှောက်ပြုမှု ပုဒ်မ ၅၆/၆၃ တို့နဲ့ အသီးသီးစွဲချက်တင်ခဲ့ပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကို တရားစွဲတဲ့အဂတိပုဒ်မက နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေ အဂတိလိုက်စားရင် စွဲဆိုတဲ့ပုဒ်မဖြစ်ပြီး ပြစ်မှုထင်ရှားရင် အနည်းဆုံးထောင် ၁၅ နှစ်ချမှတ်ရမယ့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်ပါတယ်။
ပထမအမှုနှစ်ခုအတွက် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၅ အရ ထောင်ဆယ်နှစ်စီကို သီးခြားစီကျခံရမှာဖြစ်ပြီး GGSနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အမှုနှစ်မှုမှာ ထောင်ဆယ်နှစ်စီကို တစ်ပေါင်းတည်းကျခံခိုင်းလို့ ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ဟာ စုစုပေါင်း ထောင်အနှစ်သုံးဆယ်ကျခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ကို အရေးယူမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြစ်ဒဏ်တွေက မျှတတယ်လို့ ဥပဒေအကြံပေး ဦးခင်မောင်မြင့်က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
"သူ့ကိုစွဲထားတဲ့ ပုဒ်မက ပြစ်မှုထင်ရှားရင် အနည်းဆုံးထောင် ၁၅ နှစ်ချလို့ရတာပါ။ ခု လေးမှုကို နှစ်သုံးဆယ်ဆိုတော့ ဒါလည်း မျှတတယ်လို့ ယူဆပါတယ်"လို့ ဦးခင်မောင်မြင့်က ဆိုပါတယ်။
GGS ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့နှစ်မှုလုံးမှာ အဲဒီကုမ္ပဏီက မန်းနေဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဦးသိန်းထွေးနဲ့ ဦးအောင်မြတ်တို့ကို ထောင်ဆယ်နှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ပေါင်းတည်း ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာ ထောင်အနှစ် ၂၀ အစား ဆယ်နှစ်ပဲကျခံရမှာပါ။
တစ်ခါ ကုမ္ပဏီက မန်နေဂျာ ဦးသူရအုံဟာလည်း လာဘ်ပေးလာဘ်ယူရန်အားပေးအားမြှောက်ပြုမှုနဲ့ ထောင်ငါးနှစ်ကျခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒါဟာ အန်အယ်လ်ဒီအစိုးရလက်ထက် လာဘ်ပေးရန် ကြိုးစားအားထုတ်သူတွေကို အရေးယူလိုက်တဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ဖြစ်စဉ်လည်း ဖြစ်လာပါတယ်။
ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေ တိုးလာမယ်လို့ အဂတိ တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်ပြော
အဂတိ မှု နဲ့ ဖမ်းဆီး ခံရတဲ့ တနင်္သာရီ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ်လဲ့လဲ့မော်
"အဂတိလိုက်စားရင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပဲ အရေးယူတယ်။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေကို အဂတိလိုက်စားဖို့ တွန်းအားပေးတဲ့ သူတွေကို အရေးယူတာ ရှေ့မှာ သိပ်မရှိထားဘူး။ အခု ဒီအမှုမှာ လာဘ်ပေးသူတွေကို အခုလို ထောင်ဒဏ်တွေနှစ်အများကြီးချတာ ကြိုဆိုတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေက အခုမှ တကယ်ကို စအသက်ဝင်လာတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်" လို့ ဦးခင်မောင်မြင့်က ပြောပါတယ်။
ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ကိစ္စဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တနင်္သာရီတိုင်းလာကတည်းက တိုင်တာမှုတွေတော်တော်လေး ပွက်လောရိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် ပါတီက အတော်လေးဂရုစိုက်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ မုံရွာအောင်ရှင်ကပြောပါတယ်။
"ဒါကြောင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကလည်း စုံစမ်းတဲ့အခါ သူမှားနေတာတွေတွေ့လာတယ်။ ဒါကြောင့် တရားစွဲတယ်။ ပါတီကလည်း သူ့ကို လိုအပ်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုပ်ပြီးသွားပါပြီ"လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အစိုးရအဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းက သူခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စနှစ်ခုကို ပြောကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ မုံရွာအောင်ရှင်က ပြောပါတယ်။
တစ်ခုက ငွေကြေးနဲ့အဂတိလိုက်စားမှုဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုကတော့ လူမှုရေးရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တယ်လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လာဘ်စားပါက ထောင်ချအရေးယူမှာဖြစ်ပြီး ထောင်ဝင်စာလိုက်တွေ့မယ်လို့ ပြောကြားထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"အားလုံးလည်း သိပြီးသားပါ။ ရှေ့မှာ လည်း ဝန်ကြီးချုပ်တချို့ ဥပမာ မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်(ဟောင်း)ကို အရေးယူခဲ့တာတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။ ဒေါ်လဲ့လဲ့မော်ကိုလည်း စဖြစ်တည်းက ပါတီက ထုတ်ပယ်ပြီး အရေးယူထားပြီးသားပါ။ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိုအောင်စိုး(အန်အယ်လ်ဒီအမတ်၊ ယခုအခါ တစ်သီးပုဂ္ဂလအမတ်အဖြစ်ရပ်တည်နေ) ဆိုလည်း ကျွန်တော်တို့က အရေးယူခဲ့ပြီးသားပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောပြီးသားပါ။ ဒီလိုတွေဖြစ်လာရင်စိမ်းစိမ်းကျက်ကျက် မျက်နှာမလိုက်ဘဲ အရေးယူမယ်ဆိုတာပါ။ အခု ဒေါ်လဲ့လဲ့မော်ကို ဥပဒေအရ ပြစ်ဒဏ်ချတာကတော့ ကျွန်တေ်ာတို့ ပါတီအနေနဲ့ ဘာမှ ထပ်ပြောစရာကျန်တော့မယ်မထင်ပါဘူး"လို့ မုံရွာအောင်ရှင်က ပြောပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့် လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ရာမှာ သင်ခန်းစာယူစရာတွေဖြစ်လာပြီး ရှေ့လျှောက် ပိုသတိထားရမယ်လို့ မုံရွာအောင်ရှင်ကပြောပါတယ်။
ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ဟာ ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအန်အယ်လ်ဒီပါတီကနေ သရက်ချောင်းမြို့နယ်ကနေ တိုင်းဒေသကြီး အမတ်အဖြစ် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရပြီးတဲ့နောက် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံရပြီး ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန် သုံးနှစ်ကျော်ထမ်းဆောင်အပြီးမှာ ခုလို အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့အရေးယူခံရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်လဲ့လဲ့မော်အနေနဲ့ အယူခံထပ်တက်မတက်ဆိုတာတော့ မသိရသေးဘူးလို့ သူ့ဘက်က လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ရှေ့နေ ဦးနိုင်လင်းထွန်းက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
အခုအမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးကျော်စိုးက ဆက်သွယ်မေးမြန်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အဂတိမှုနဲ့ ထောင်နှစ်သုံးဆယ်ကျတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း